March 9, 2018 – HORNAFRIC MEDIA
WARBIXIN: Weeraro Lagu Bartilmaameedsanayo Muslimiinta Sri Lanka oo Socda & Xasuuq laga cabsi qabo
Posted on March 9, 2018 by Queen Kiin
Dhibaatada lagu hayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka Sri Lanka ayaa sii kordheysa inkastoo xukuumada dalkaas ay dadaal badan wado. Weerar lagu qaday masaajid ku yaala magaalada Kuruwita xili habeen ah ayaa cabsi geliyay muslimiinta laakiin boqolaal boolis ah iyo ciidamo si gaar ah u tababaran ayaa gaaray deegaanka uu falkaas ka dhacay. Saraakiisha Booliska ah ayaa diiday iney saxaafada la hadlaan laakiin wakaalada wararka ee Turkey ayaa sheegeysa in weli ay jirto…
Uhuru Kenyatta & Raila Odinga oo Kulankii ugu horeeyay Yeeshay & Heshiis Cusub.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la kulmay Raila Odinga maanta oo Jimco ah markii ugu horeysay tan iyo doorashadii natiijadeeda muranka dhalisay ee sanadkii tagey ka dhacday dalkaasi. Waxay ku heshiiyeen Madaxweyne Uhuru iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay meel iska dhigaan khilaafka u dhaxeeya oo ay kawada shaqeeyaan dib u heshiisiin iyo midaynta shacabka Kenya. Uhuru iyo Raila oo si wada jir ah ula hadlay Saxaafadda kulanka kadib ayaa waxay sheegeen in Kenya…
Madaxweyne Gaas oo Qado Sharaf u sameeyay Agaasime Koofi iyo Wafdi uu Hogaaminayay.
Madaxweynaha Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa qada sharaf u sameeyay Agaaasimaha Guud Hay’adad Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya Gaashaanle Sare Maxamed Aadan Koofi iyo wafdi uu hoggaaminayay oo maalmahan howlo shaqo u joogay magaalada Garowe ee xarunta Gobolka Nugaal, ahna caasimadda Puntland. Mas’uuliyiintani ayaa ka wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa ilaalinta xaduudka Soomaaliya ay la wadaagto Dalalka darista, gaar ahaan qeybta kaga beegan deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Sidoo kale Agaasimaha ayaa Madaxweynaha…
DFS oo si buuxda ula soo wareegtay Furaha Internet-ka Soomaaliya ee (Dot SO)
Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka ayaa si rasmi ah ula soo wareegtay Astaanta Qaranka ee Internetka Soomaaliya (dotSO) oo ay maamuli jirtay hay’ad ka madax banaan Dowladda, balse wixii hadda ka dambeeya lagu soo wareejiyay Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka oo masuul ka ah maamulka Astaanta qaranka sida uu qorayo qodobka 54aad ee Sharciga Isgaarsiinta Qaranka Qeybta hore ee wareejinta ayaa ahayd heshiis 7dii Maarso 2018 dhex maray Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka iyo shirkadda Cloud Registry oo adeegyo farsamo siisa…
Maxay Jaamacada Carabtu ka yiraahdeen Arinta DP World.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Sooomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ay wehliyaan safiirka soomaaliya u fadhiyo Masar ahna wakiilka joogtada ee Jaamacadda Carabta Cabdiqani Maxamed Wacays iyo diplomaasiyiinta safaarada ayaa ka qeyb galay shirka wasiiradda arrimaha dibada ee Dowladaha Carabta oo ka dhacay Qaahira. Kal fadhiga wasiiradda arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta ayaa ahaa kii 149 waxana looga hadlay Sagaal ajande oo kamid tahay warqad Dowladda Soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda carabta kuna…